Chii Colblindor? - 💡💻 Iris - Blue Light Filter for Eye Protection 🛌👀
Color upofu Kazhinji kunoitika kana munhu haakwanisi kuona mavara ari mwero muoti.
Ruvara upofu inonziwo ine ruvara kukanganisika.
Kazhinji dambudziko iri zvinoitika kana munhu haagoni kusiyanisa pakati zvimwe mavara.
Kazhinji dambudziko zvinoitika pakati hanyanisi uye rinoreva akasiyana Mavara, uye apo neapo zvitema noruvara.
nyonyova, pane masero maviri aripo the retina yedu.
Zvose masero zvinoshandiswa kuona chiedza. Izvi inonzi dzinonzi pasikweya uye tsvimbo. Matanda wanikidza rima chete uye chiedza uye vachiteerera zvikuru pasi chiedza ndege. The cône Masero zvinoshandiswa kuziva ruvara.
Masero aya pfungwa pakati chiratidzo chako. nyanya, pane mhando nhatu pasikweya kuti aone ruvara i.e. girinhi, zvitema uye tsvuku.
Uropi anoshandisa mazano kubva cône masero aya kuitira kuti asimbise yedu ruvara maonero.
Sei zvine upofu kuitika?
Ruvara sightlessness anogona Kazhinji kuitika kana mumwe kana kupfuura imwe ruvara cône masero usipo, ukaona yakasiyana ruvara pane mureza kana vasiri kushanda zvakanaka.
The noutsinye ruvara upofu rikaitika zviitiko apo vatatu masero ose cône zvisipo.
The munyoro ruvara sightlessness kunoitika apo zvose cône masero matatu vari pedyo asi mumwe cône masero haasi kushanda nenzira yakakodzera.
Zviratidzo Color Upofu
Zviratidzo ruvara upofu zvinowanzotaurwa chaichengetwa vabereki kana vana vaduku. Mune zvimwe zviitiko, zviratidzo zvokuti zvishomanana kuti varege kunyange kuonekwa.
Vanhuwo zviratidzo ruvara upofu nokupinza:
Kuoma mu chinosiyanisa siyana ruvara noruvara.
An kutadza kuona pasi uye noruvara chete ruvara.
Inosiyana ruvara upofu
Pane akasiyana chikero ruvara sightlessness. Vanhu vane munyoro mumvuri insufficiency munganzwisisa mavara kazhinji muchiedza chakanaka asi ave complicatedness muchiedza simba.
Vamwe havagoni kusarura mamwe mavara chero chiedza. Ruvara sightlessness kazhinji inokanganisa maziso saizvozvo zvose uye anoramba achitsungirira zvose kuburikidza upenyu hwavo.
Kana uchida kuziva zvakawanda pamusoro inosiyana colorblindness, conduct the Vision test available at https://iristech.co/test-vision.
Kurapa Color Upofu
Hapana zvakakodzera uye kwakakwana kurapwa kuti ruvara upofu.
Special ekuverengesa uye kuonana lenses mhando zvinowanikwa musika pamwe kunobatanidza filters siyana kubatsira ruvara pokuperevedza, kana kunodiwa.
kuona Software kunogona kubatsira kusiyanisa mavara.
Color Upofu haasi "Color Upofu"
Most of the people join the term color blindness to sightlessness and color, iyo anovaudza, that if you are colorblind or colorblind then you can see only black and white or possibly grayscale pictures.
Kana tine Kutarira mashoko ipapo akasiyana anozivikanwa stipulations matatu anoshandiswa kutsanangura urema ichi:
Ndicho zvikuru chaiwo izwi. Rinotsanangura chaicho akaremara zvokusvika asi hazvina zvakanaka kuzivikanwa zvakafanana kukutaura.
kuona https://iristech.co/vision/ will help you deal with the colorblindness deficiency you are suffering from. Download software uye kunyatsoona sikirini yako.
Zita iri rinobva remakore rechi18 mutsvakurudzi anonzi sezvo John Dalton.
The mutsvakurudzi yakanga colorblind. Iye anoita zvimwe kuferefeta uye anotsanangura Chiitiko ari papepa nesayenzi kekutanga.
Kutumidza zvakare ukama zvinenge mhando dzose ruvara chiono kukanganisika.